२४ घण्टा नबित्दै डाक्टर र चिकित्सक फिर्ता::Online News Portal from State No. 4
२४ घण्टा नबित्दै डाक्टर र चिकित्सक फिर्ता
बागलुङ, २५ कार्तिक — सामान्यतया कर्मचारीहरु सरुवा भएर आएपछि दुइ बर्ष एउटा कार्यालयमा काम गर्ने भन्ने सरकारी प्रावधान छ । केही सुरक्षा अधिकारीको बाहेक अधिकांस कर्मचारीको त्यस्तो प्रावधान लागू पनि हुन्छ । तर धौलागिरी अञ्चल अस्पताल त्यस्तो स्थान हो जहाँ हाजिर भएको २४ घण्टा नबित्दै डाक्टर र चिकित्सक फिर्ता हुन्छन् । कतिपयले सरुवा भएर आउने बेलामै काज र फिर्ताको कागज बनाएर आउँछन् । रमानामा सही गर्ने काम मात्र बाँकी रहन्छ । कतिपयले हाजिर गराएकै बेला कार्यालय प्रमुखसँग रमानापत्रमा पनि हस्ताक्षर गराउँछन् । यस्तै उदाहरण बनेका धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी भएका कन्सल्टेन्ट डा. शुसिलमोहन भट्टराई र कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा.अमर पौडेलको छ । उनीहरु दुवैजना बीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनीहरुको नियुक्ती र सरुवाको कागज मन्त्रालयबाटै एकैपटक बनेको थियो । उनीहरुले बागलुङ स्थित धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा टेक्नै परेन । मन्त्रालयबाटै सरुवा भए र काजको कागज बनाएर बिर अस्पतालमै फर्किए । आएका चिकित्सक पनि २४ घण्टा बागलुङ घुमेर फर्केका छन् । स्त्रिरोग बिशेषज्ञ डा. अनुपा थापा, फिजिसियन डा. कल्याण सापकोटा र बालरोग बिशेषज्ञ डा. प्रज्वल पौडेल धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा हाजिर भएर २४ घण्टामा फर्किएका हुन् ।